Bitcoin karaa salphaan akkamitti argachuu dandeenya? - Wanofi.com
Welcome! Baga nagaan dhuftan.
All Category Fashion & Beauty Electronics Laptop Home, Garden Car Parts & Accessories Mobile phone Uncategorized
Karaa Salphaatiin Bitcoin Argachuu Kan Dandeenyu
Karaa nuti Bitcoin itti argachuu dandeenyu waliif himuu keenyaan dursa Bitcoin lakkoofsota akkamii irraa ijaarame jennee beekutu nu barbaachisa. Jalqaba hundeeffama Bitcoin bara 2009 keessa yoo ilaallee maqaa “Satoshi” jedhamu itti moggaafameetu jira. Gosa Kiriiptoo kamiinuu maqaa kana moggaafateeti. Kanaaf Bicoin tokko (BTC1) lakkoofsa digit maqaa isaa danda’e nii qaba. Digit baayee xiqqaa Satosh jedhamuun yoo lakkaawamu
0.0001BTC-10,000 Satoshi –
0.000001BTC= 100 Satoshi
0.00000001BTC =1 Satoshi
Egaa bifa kanaan BTC’n kan ijaarame yommuu tahu App bakka tokkotti hojjettanii nuffii tokko malee BTC argattan isiniif tarreessa. App kun bifa Game dhaan mobaayila keenyaan kan taphannee argannuudha. Google Store irraa nii argattu. Isaanis:-
App kun ja’anuu(6) bakka tokkotti Bitcoin isiniif kafalaa deema. Karaan inni isiniif kaffalu kan dursitanii qopheeffatan Coinbase account create godhachuu qofaani. App kun namootni hedduun kan ittiin of jijjiiran yommuu tahu obsa kan barbaaduudha. App kun bifa satoshi olitti tarreeffameen kan kaffaluudha. Coin base keenya erga create goonee booda yeroo App keenya taphannee gara coinbase wallet keenyaatti ergannu kan nu gaafatu “E-mail” nuti coinbase ittiin baafanne qofa. Kanaaf email keenya qofa galchinee withdraw gochaa deemna.
AppGame kunneen sa’a 24 keessatti yeroo lama nuuf kenna. Al tokko taphannee erga fixnee booda kan biraatti darbina hundumaa isaa sa’a tokko keessatti erga taphannee raawwannee turtii sa’a 12 boodas itti deebinee taphanna jechuudha. Akka kanaan qobaa keenya tahuus baatee nama lama sadiin gareen waliin taphannee ji’a muraasa keessatti Bitcoin tokko walitti qabachuu dandeenya. Wayita kana Bitcoin tokko argachuu jechuun qarshii keenyatti gara miliyoona lamaati jechuudha. Qobaa keenyas jabinaan taphannee bitcoin app kana irraa walitti qabuu dandeenya.
Kan biraan karaan nuti bitcoin salphaatti argachuu dandeenyu daandii salphaa qofaan
Minig:- kunis gosa sadiitu jiru.
Small mining- namootni yeroo mana isaanii taa’anii mining godhaniidha. Ofii keenyaa maashinii isaatiin mana keenyatti tolfannee kan gochuu dandeenyu.
Cloud mining- qarshii kennuu qofaan daldalota waliin waliif galanii bu’aa isaanii qofa kan eeggatan eessatti akka mining tahu kan hin beekamne. Inni kun amansiisaa miti yeroo baayee.
Big mining- isaan kun akka Industirii, btc club waliin mining kan godhamuudha. Baayee amansiisaadha.
Hand to hand- kana jechuun btc kan hin qabne qarshii isaa qabatee isa btc qabu bira deemee kallattiidhaan fuulaa fuulaan kan wal jijjiirruudha. Isaan lamaan garuu mobaayila isaanii irra wallet btc jiraachuun dirqama.
Maashinii ATM BTC- Kun biyya keenya keessatti dalagaa hin jiru garuu akka hubattaniif kan fayyadu. Namootni walii waliiniitiin wal jijjiiruu irra maashii irraa ATM isaaniitiin BTC wal jijjiiruu filatu.
Asirratti ibsa. ATM maashinii gaafa galchinu maashiin sun lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Lakkoofsi bilbilaa gaafa itti galchinu BTC gara bilbila keenyaatti nuuf erga jechuudha. Kara biraa BTC qabaannee qarshiitti jijjiiruu yoo nu barbaachise bilbila keenyaan BTC keenya gara maashiniitti yoo erginu innimmo qarshii baasee nuuf kenna jechuudha. Bifa kanaan bakka maashinii ATM dhaabbannee BTC itti gurguruus qarshiitti jijjiirrachuus dadeenya.
Coinbase App- kunis biyyoota akka America, Ingliz, Canada keessatti kan fayyaduudha. Coinbase keenya irraa account baankii keenyaa waliin walitti hiinee BTC account baankii keenya irraa bituu dandeenya. kanas daandirra osoo deemnuu mana keenya hotelaa fi kaaffee bakka feeneyyuu teenyee btc kara salphaadhaan bitachuu kan dandeenyuudha.
Karaalee hedduutu jiru bitcoin argachuu kan dandeenyu isaan kunis
Karaa bilisaan argachuu dandeenyu (Free BTC)- kun ammo yeroo keenya kan fudhatuu fi yeroo dheeraa booda kan argannu hojii qabnu cinatti baayee nun barbaachisu taanan kanaan suuta argachuu dandeenya
Qarshii baasnee kan argachuu dandeenyu- kun amma kaanee amma kan argannuu fi sa’atii barbaannee fi yeroo feenetti gurguruus bituus kan dandeenyuudh.
© 2021 wanofi.com. All Right Reserved. | Powered by wanofi.com